UPDATE: Wararkii ugu dambeeyay 28 ruux oo lagu dilay weerar dhanka cirka ah oo ka dhacay iskuul ku yaalla Libya | HalQaran.com
Home Caalamka UPDATE: Wararkii ugu dambeeyay 28 ruux oo lagu dilay weerar dhanka cirka...
UPDATE: Wararkii ugu dambeeyay 28 ruux oo lagu dilay weerar dhanka cirka ah oo ka dhacay iskuul ku yaalla Libya
Tripoli (Halqaran.com) – Ugu yaraan 28 qof ayaa ku dhimatay kuwa kalena waa ay ku dhaawacmeen duqeyn dhinaca cirka ah oo lagu bartilmaameedsaday iskuul milaterigu uu leeyahay oo ku yaal caasimadda Liibiya ee Tripoli, saraakiisha ayaa sidaasi sheegay.
Ma cadda faahfaahinta weerrarkaasi, hasayeeshee wararku waxa ay sheegayaan in weerrarka ay soo qaadeen ciidammada fallaagada ee daacadda u ah Janaraal Khaliifa Xaftar, kaas oo saldhiggiisu uu yahay bariga Liibiya.
Muuqaal laga soo duubay goobta ayaa muujinaya maydad daadsan barxadda iskuulka la weerraray.
Dowladda Liibiya ee ay baritaarto Qaramada Midoobay ayaa waxa ay la dagaalamaysay xooggaga kacdoonka ee uu hogaaminayo Janaraal Xaftar.
Afhayeenka wasaaradda caafimaadka ee Xukuumadda Heshiiska Qaran lagu dhisay ee Liibiya, Amin al-Haashimi, ayaa sheegay in “Duqeyn cirka ah oo lala beegsaday iskuul milateri oo ku yaal Tripoli lagu dilay 28 qof tobannaan kalana lagu dhaawacay”.
Liibiya ayaa waxaa ka dhacayay qulqulatooyin iyo kala qeybsanaan tan iyo markii xilka laga tuuray hogaamiyihii mudada dheer dalkaasi maamulayay Mucamar Qadaafi kaddibna la dilay 2011.
caasimadda Liibiya ee Tripoli
iskuul ku yaala Libya
weerar dhinaca cir ah